Snowdrift. Kedu ihe ọ bụ, otu esi kpụrụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka ugwu dị n’elu ugwu, a gaghị enwerịrị ike ịnụ okwu ahụ snowdrift. Glaciers dị ezigbo mkpa n'ụwa niile, ọ bụghị naanị n'ihi na ha na-echekwa nnukwu mmiri dị mma, kama ọ bụ n'ihi na ha na-eme ka ọtụtụ ihe ndị dị ndụ na gburugburu. Snowdrifts bu ebe etolite n’ime glaciers ma dikwa mkpa na nhazi na njimara nke gburugburu.
N'isiokwu a anyị ga-akọwa ihe ntụgharị igwe bụ, etu esi akpụ ya na nke kachasị na Spain.
1 Kedu ihe bụ snowdrift?
2 Snowdrift nke Countess
3 Mbenata nke snowdrifts
Kedu ihe bụ snowdrift?
Probably nụla ihe karịa otu oge. Snowdrift bụ mpaghara ugwu ebe a na-ahụ nnukwu igwe snow. Ọ bụrụ na ị garala n'ugwu snow, ị ga-ahụ mpaghara ebe enwere snow karị. Ọbụna snow a nwere ike iguzogide okpomọkụ kachasị elu ma nọrọ ebe ahụ n'oge ọkọchị.
Nke a bụ n'ihi na snowdrift bụ ebe echedoro pụọ na mmemme ihu igwe. Oké ifufe snow na-eme na blizzards n'oge oyi niile na-achịkọta snow na mpaghara ndị a. Na-echebe karịa ifufe, si radieshon nke anyanwụ na ihe ndị ọzọ metụtara gburugburu, ọ nwere ike ịnọgide na-akwakọba.
Mgbanwe ndị ọzọ na-emetụta etu snowdrifts bụ nchịkọta snow. Ọtụtụ snow ekpokọbara, ogologo oge ọ ga-anọgide na-akwakọba. Nke a bụ ihe na-eme ka ụfọdụ kwụsie ike n'akụkụ dị iche iche nke ugwu na-emegharị ka a okpomọkụ, iru mmiri na ọnụnọ nke snow na ice.
Anyị na-ahụ nnukwu snowdrifts ndị ọzọ ama ama dị ka Condesa glacier, nke dị na Sierra de Guadarrama. Na mba ndị ọzọ dịka Argentina na Chile ha na-ejikwa aha a akpọ ụfọdụ ebe glaciers nke Patagonia. E nwere ọtụtụ ugwu ebe a na-echekwa snow n’akụkụ ọnụ osimiri ma ọ bụ n’akụkụ ọdọ mmiri. Agbaze mmiri mmiri nke ice mgbe niile bụ ihe na-eri mmiri ndị a.
Snowdrift nke Countess
Ugwu snow a nke a kpọtụrụ aha n'elu bụ ama ama. Ọ dị na Sierra de Guadarrama ma dị ihe dị ka mita 2.000 n’elu oke osimiri. Ugwu a nwere ọrụ ya ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-eji snow a na-echekwa n'oge ọkọchị. Agbaze nke snow a nke nta nke nta n’ime afọ na-eme ka eruba nke Osimiri Manzanares.
Ugwu snowdrift a abughi nani na-achikota snow site na mmiri ozuzo, kamakwa site na nke oke ifufe, ifufe na blizzards na-ebuga. Ọ bụ ebe a na-echebe ekpuchi nke ọnụ ọnụ ebe ị nwere ike ịchọta nnukwu snow nke gbakọbara n'afọ niile.
Ejiri ya site na mbido narị afọ nke XNUMX ruo ngwụsị narị afọ nke XNUMX iji chịkọta snow. E ji ụgbọ ịnyịnya ibu ndị ji ịnyịnya ibu mee ka snow ahụ gaa Madrid na obodo ndị ọzọ. Ejiri Snow iji mee ka nri dị oyi ma mee ka mmanya ụfọdụ nwee ume. Buru n’uche na n’oge a enweghị ndị friji ma ọ bụ friza. Mgbe ahụ, a na-eji snow nkịtị eburu n'afọ niile maka ebumnuche ndị a. Iji nwee ike iji snow a mee ihe, e kere mgbidi nkume n'akụkụ ala, nke mere na snow gbakọtara n'ụzọ dị mfe na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu.
Ugwu snow a bụ ihe kachasị mkpa na ihu ndịda nke Sierra de Guadarrama. Ogologo ya bụ mita 625 na obosara nke 80 mita. A na-ekpuchi mpaghara a dum na snow n'afọ niile.
Mbenata nke snowdrifts
Kemgbe ọtụtụ afọ, mpaghara ya dum na-ebelata dị ka a tụrụ anya ya. Mmụba nke okpomọkụ mepụtara site na mmụba na uto griin haus Ọ na - eme ka igwe na - erughị ala na - agbakọ maka ọtụtụ ihe. Nke mbụ bụ mbelata mmiri ozuzo n'ụdị snow. Na nke ahụ, ifufe ma ọ bụ nnukwu mmiri ahụ ma ọ bụ oké ifufe agaghị ebili ọtụtụ ihe. Nke abụọ bụ mmụba nke okpomọkụ n'ozuzu n'afọ, na-eme ka o sie ike ichebe snow.
N'ihi mmirize nke na-eme n'oge ọkọchị, Osimiri Manzanares na-eri mmiri. Na nzube ka ha meworo ọ pụtaghị na ìgwè snow kpamkpam. Kama nke ahụ, ọ na-ebelata olu ya. "Anwansi" nke ebe ndia bu na oge opupu ihe ubi, ha ka nwere otutu otutu snow.
Nchịkọta snow a bụkwa n'ihi okpomọkụ dị oke ala anyị na-ahụ n'afọ. Kame ayɛ sɛ na Condesa snow no di mfe 5. Mmiri mmiri ozuzo bụ 1400 mm kwa afọ, na-etinye otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ya n'oge oyi. N'ime ụbọchị 365 kwa afọ, snow na-adịkarị ụbọchị 250, nke bụ nnukwu ihe nweta.
Banyere ahịhịa ya, ọ na-emegharị ọnụnọ nke snow. O nwere ahihia pere mpe nke pere mpe. Ha na-etokarị mgbe itoolu na-apụta ma kpuchie ihe ruru 33% nke ala. Otu n'ime ahihia ahihia di na mpaghara ndia bu joragales na ahihia ahihia nke ndi ozo. Enwekwara ụfọdụ mosses na ahịhịa na-eto eto ma ha pere mpe.
Tinyere snowdrifts, ị nụkwala ebe snow na-ada. Uzo a na-ezo aka n'otu ihe dika snowdrift. Nke ahụ bụ ịsị, ebe dị oke oke ugwu ebe snow na-agbakọba nwere ike ijide ọbụlagodi na ọkọchị. Ọ bụ obere galic glacier. Ugwu a na-etinye ugwu dị elu n'etiti mita 2.500 na 3.000.
E nwekwara oge a na-akpọ ebe ndị a helero. Otú ọ dị, ọ nwere ọchịchọ a na-akpọkarị na mgbe ihe na-agbakọta bụ akpụrụ mmiri nke na-ewere ọnọdụ ebe abalị oyi na mmiri gbazee.
Dịka ị pụrụ ịhụ, okike nwere ebe ndị nkịtị adịghị. Ihe kachasị mma bụ na snow dara ma gbazee mgbe obere oge gachara, ka okpomọkụ na-arị elu. N'okwu a, snowdrift nwere ike ịchịkọta ha ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Snowdrift